Dhageyso; Xildhibaan Ismaaciil Keyroow oo ka hadlay xaalada guud ee maamulka Koonfur Galbeed fariina u diray Dowladda Soomaaliya
Saturday December 15, 2018 - 13:35:20 in Wararka by Radio Maanta
Xildhibaan ismaaciil keyroow oo kamid ah siyaasiyiinta kazoo jeeda Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xiligaan Dowladda Soomaaliya ay faragelin ku sameyso arrimaha Maamulka Koonfur Galbeed.
Ismaaciil Keroow ayaa waxaa uu tibaaxay in shacabka koonfur galbeed ay si weeyn usoo dhaweeyeen Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo balse madaxweynaha uu ku guuldareeystay in uu fuliyo balamihii uu ka qaaday shacabka soomaaliyeed.
Waxaa uu sidoo kale carabka ku dhuftay Ismaaciil Keyroow in Xukuumada Soomaaliya looga baahanyahay in faragelinta ay ka joojiso Doorashada Madxatinimo ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Wuxuuna geesta kale sheegay in haatan muhiim ay tahay in dib loo dhigo doorashada Maamulka Koonfur Galbeed maadama marxalada haatan ka taagan baydhabo ay tahay mid aad u liidata.
Sikastaba ha ahaatee hadalka Xildhibaan Ismaaciil Keyroow ayaa kusoo beegmaya xili Dowladda federaalka soomaaliya lagu dhaliilayo iney faragelin ku heyso Doorashada Madaxtinimo ee Maamulka Koonfur Galbeed iyo soo qabashadii Musharax Sheekh Muqtaar Roobow